आफुलाई अपाङ्ग भनेर जीवनमा कहिले नसोच्ने चित्र, पहिलो नेपाली डिसेवल साइक्लिस्ट : Apangata Sarokar अपाङ्गता सरोकार:Create media space for disABILITY
सरकारी पोलिसी त थियो तर ठूला ठूला सिटिहरुमा मात्र थियो तर गाउँमा त विरामीहरुमा धामी झाक्रीहरु गथ्र्याे त्यो गर्दा खेरी चाही अलिकति ढिला भयो ।
साइकलसँग चाँही कसरी तपाईको रुची बढ्यो ?
साइक्लिङ्गमा भन्नुपर्दा एसएलसी दिदा मैले साइक्लिङ्ग सिकेको पनि थिएन । फुटवलसँग चाहिँ म काठमाडौं भेट्न आउदा जापानिज साइक्लिस्टहरुलाई देख्दा नै प्रेरणा पाएको हु । त्यसपछि मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर अघि बढे त्यसपछि मैले साइक्लिनिङ्ग गर्न सिके ।
कति समय लाग्यो तपाईलाई साइक्लिनिङ्गमा पोक्त हुनको लागि ?
मलाई पोक्त हुन त एक महिना जति लाग्यो ।
मुख्य त तपाईलाई विश्व भ्रमण गर्ने प्रेरणा कसरी जाग्यो ?्र
प्रेरणा चाहिँ मलाई पनि केहि गर्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर अगाडी बढे । नेपालको भुमिका झन मलाई उर्जा प्रदार्न ग¥यो म पनि विश्व भ्रमणमा जान सक्छुजस्तो लाग्यो त्यसपछि मैले काठमान्डौं ६ महिना जती बसेर स्पन्सरहरु खोजेर शार्क देशहरु पुगे ।
सर्वप्रथम नेपालको यात्रा कहाँबाट शुरु गर्नुभयो ?
नेपालको यात्रा शुरु मेचीबाट गरेको थिए ।
हजूरको घर चाही ?
पुर्व तिर हो ।
नेपाल भ्रमण गर्न कति समय जती लाग्यो ?
नेपालको मेची देखि महाकाली सम्मको यात्रा त्यसमा पनि माओवादी द्धन्द्धको समयमा ढेड महिना जति लाग्यो ।
केही अप्mट्याराहरु त भोग्नु परेन ?
अप्mट्याराहरु त मैले त्यस्ता खासै भोग्नु परेन । सुदुरपश्चिममा चाहिँ अलिकति अफ¥याराहरु महशुस भयो, बास नपाउने, मान्छेहरुले संकोचले सोच्ने त्यो गर्दा चाहीँ अलिकति डिफिकल्टी भयो ।
तपाई नेपाल यात्राको क्रममा जानेबेलामा घरपरिवारका सदस्यहरुबाट के कति लेवलको चाहना
कुनै पनि फेम्लिले त एउटा अपाङ्ग भएको छोरालाई कसैले नेपाल घुम्न जा भनेर त भन्दैन । उहाँहरुले छोरा केही बन्नुपर्छ भन्ने धारणा भएकाले म वल्र्ड टुरमा लागे । फेम्ली म्याम्वरहरुले केही प्रोत्साहन गर्नुहोला भनेर लागि परे तर वल्र्ड टुरका लागि भने प्रमिसन थिएन ।
तपाई नेपाल भ्रमण शुरु गर्ने वेलामा आप्mनै वल र स्रोतका भरमा थाल्नु भएको हो या कुनै सस्थाबाट सहयोग प्राप्त भएको थियो की ?
मलाई कुनै पनि सस्थाबाट सहयोग भकोहोइन । मसँग परेका मलाई सम्झिने साथीभाईहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँको फेम्लीले चाहीँ मलाई सहयोग गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा सुचारु अवस्थाका जतिपनि यी अपाङ्ग सेवा सम्बन्धी एजजीओ आइएनजीओ छन् तपाई
लाई सहयोगको लागि एप्रोच गर्न आएको सस्थाचाहिँ कुन हो ?
अहिलेसम्म म कुनै एनजीओ आइएनजीओ सित आवद्ध भएको छइन । नेसनल प्राल्न बोकेर वल्र्ड टुर गरिरहेको छु ।बिचबिचमा चाहिँ …………
अहिलेसम्म भन्नुपर्दा कतिओटा राष्ट्रमा साइक्लिङ्ग गरिसक्नु भयो ?
तपाईको फरदर प्राल्न के छन् कतिओटा ?
अब मेरो प्राल्न भनेको हन्ड्रेड टेन कन्ट्री कम्पिल्ट गर्ने हो । अहिले चाहिँ लुम्बिनी देखि माउन्ट बेसक्याम्पसम्म साइक्लिनिङ्ग गदैछु ।
यस प्रोजेक्टमा कुनै संघ सस्थाअरुले पनि सहयोग गर्नुभएको छ ?
अहिले चाहिँ भन्दा कसैले गरेको छैन यसमा मारकेटमा र नेताहरुमानजर त लागिरहेको छ हेरौ कस्तो सहयोग गर्नुहुन्छ ।
प्राक्टिकली भन्नुपर्दा तपाईको अहिलेसम्मको यात्रामा खर्च सबैले आपैmले नै गर्नुभएको हो ?
नेपालमा म जस्ता साइकिलिस्ट थुपै हुनुहुन्छ समय समय यस्ता थुप्रै इभेन्टसहरु भइरहन्छन् । अहिले काठमान्डौंमा साइकल क्रेज पनि बढ्दै छ । केही इस्पन्सरहरुले प्लेन टिकटसम्मको व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ अनि जुन देशमा गइन्छ त्यस देशका एनआरएनहरु भयो त्यहाँको नेपलिज सोसाइटीहरु भयो उहाहरुको कोडिनिसनबाट सहयोग जुटाउछु ।
त्यसोभय तपाईलाई नेपालमा बस्ने भन्दा पनि बाहिर बस्ने नेपालीहरुले सहयोग गर्नुभएको छ ?
अ हाम्रो देशमा बस्ने नेपालीहरुको भन्दा बिदेशमा बस्नुहुने नेपालीहरुले बढी सहयोग पु¥याउनु भएको छ ।
तपाईको यात्राको क्रममा सबैभन्दा राम्रो क्षणहरु छन् भने हामीसित सेयर गरिदिनुहोस् ।
मयात्रामा घुम्दाखेरी मलाई न्यूजिल्याण्ड मन परेको हो । त्यहाको हावापानी एकदमै राम्रो अनि साइक्लिनिङ्ग गर्न पनि इन्भारमेन्ट एकदमै राम्रो छ । त्यो देशको पिपलबाट पनि धेरै ठूलो लगानी पाएको थिए । त्यसकारणले पनि मलाई यात्रामध्येको त्यो यात्रा विर्षण नसक्ने क्षण हो ।
तिता मिठा घट्ना केही ?
तिता मिठा त कतै लुटपाट हुन्छ । पाकिस्तानको टुरमा फुड प्वाइजन भएर मर्ने अवस्थामा पुगेको थिए । त्यहा एम्वेसी नभएको भए ज्यानै जान्थियो होला । त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो भक्त प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्थ्यो उहाँको कोडिनेसन भएको थियो ।
शारीरिक रुपमा तपाईलाई कस्तो अप्ठरो झेल्नुपर्छ यात्राको क्रममा सामान्य अवस्थाको मान्छेसँग तुलना गर्दा ।
हिडडुल गर्न र साइक्लिनिङ्ग गर्न त मलाई कुनै प्रोबलम छैन तर चिसो हुदा भने खुट्टामा प्रोबलम हुन्छ ।
मुख्य त तपाईलाई पोलियो भाइरसको कारणले अपाङ्गता हुनुप¥यो त्यस विषयतिर चेतना बढाउनेतिर पनि के कस्तो प्रयास गर्नु भएको छ ?
स्पेसली भनेको चाहिँ नेपालमा बढीजसो चाहिँ भन्नुपर्दा स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ कपि पेन्सिल कलेक्सन गरेर दुर्गम गाउँठाउँमा पु¥याउछु म बेलाबेला । तपाईको चाहिँ पोलियो सेक्टरमा जासम्म सकेसम्म अवारनेस गरिराखेको छु । मैले त अव वोलीबाट र आफुले सक्ने एफोर्टबाट सपोर्ट गर्नहो उहाँहरुलाई ।
तपाईले यात्रामा पिस क्याम्पेन लिएर जानु हुदैछ । त्यसमा पोलियो फ्रि नेसन भन्ने पनि एड गर्ने के छ प्राल्न तपाईको, नेपालमा पनि पोलियो फ्रि नेसन बनाउनु पर्छ भन्ने जस्तो त अवस्य नै तपाईलाई हुन्छ होला त्यसप्रति चाहिँ तपाई्को अप कमिङ योजनाहरु छन् कि ?
नेपाल मात्र नभएर होल वल्र्डमै फ्रि पोलियो हुनुपर्छ भन्ने चाहना हो । मेरो डिजास्टर्डले केही गर्नसक्छ है राष्ट्रको लागि पनि र अरु डिजास्टर्डलाई पनि इन्करेज दिन सक्छ सो अपाङ्ग भएर हिनताबोध लिएर बस्नु भएन । फिजिकल अपाङ्ग हो । हामीले पनि केही गर्न सक्छौं भन्ने संसारमा जनचेतना पनि भयो र हाम्रो देश नेपाल गरिव जनता धनी भएपनि तपाईको एउटा धनी देशहरुलाई पनि गरिव देशको नेपालीले चाहिँ हि क्यान अल्सो गिभ एवारनेस भन्ने भन्ने चेतना पनि दिदैछु । र मेरो यात्राको चाहिँ वल्र्डटुर गर्दा किताव लेखेर मैले के भोगे त के पाए त भनेर नेपालीलाई मात्र नभएर इन्टरनेसनली प्रकाशन गर्न सोचमा छु ।
आपैmले लेख्ने विचार हो की?
होइन राइटरलाई दिने आप्mनो त ल्याङ्गयोज नै मिल्दैन ।
आप्mनो पर्सनल जाने मेन्टेन गर्नु भएको छैन् ?
माइन्ड योजक बस्छ म कन्ट्रीमा जादा परफेक्टली म के गर्छु कस्तो गर्छु मरनिङ्ग टु इभिनिङ्ग चाहिँ त्यसलाई इम्पोटेन्ट पर्सनल बनाएर चाहिँ ।
अनि यिनलाई कस्तो किसिमले इन्जोय तपाईको यात्रा एउटा जस्तो की अब क्याम्पिङ्ग गर्नुहुन्थ्यो कि?
जस्तो कि कुनै देश जादा त्यहाँको लोक्याली मिडियासँग गइन्छ अनि त्यसपछि त्यहाहरुसँग साठगाठ गरेर त्यहाँको डिजास्र्टसहरुसँग कन्ट्याक गरेर के चाहिँ अपाङ्ग जस्तो मेरो यात्राका बारेमा स्मरण मेरो यात्रामा के के भोगे के के पाए ।
सबैभन्दा पहिले कुनै राष्ट्रमा गएपछि तपाईले त्यहाँको मिडिया एजेन्सी अनी नेपाली इन्ड्टिजसँग इन्ट्रायाक्सन गरेर अनी
आप्mनो रुल प्लानिङ्ग गर्नुहुन्छ । अबको निकट गण्तव्य भनेको त्यही एभरेस्ट ।
अबको गतव्य भनेको पिस टु पिस भन्ने नारा दिएको छ मैले जस्तो वल्र्ड टुर घुम्नुभन्दा पनि मैले पनि जस्तो अव नेपालमा के गरे विदेशी पर्यटकलाई चाहिँ तपाईको लुम्बिनी, एभरेस्टबेस क्याम्पसम्मको डकुमेन्ट्री बनाएर इन्टरनेसनली गर्न सकेभने तपाईको नेपाललाई पनि टेवा पुग्छ जस्तो लाग्छ । फरमेली डोनेसन माग्नुभन्दा पनि आपूmले केही चिज गरेको देखाएर डोनेसन माग्नु उचित ठानेको छु मैले । फरमेली म इकसाइडेड छु मलाई डोनेट गर्नु प¥यो भन्दा पनि मैले चाहिँ नेपाललाई इन्टर नेसनलमा के दिन सक्छु त्यो कुरा चाहिँ म देखाउन खोज्दै छु ।
तपाईको अहिलसम्मको यात्रा गर्दा चाहिँ स्पाइड भएर तपाईका तपाईजस्तै डिसेवल नेपालीहरु छन् होला?
त्यो त अब मलाई फलो गर्ने कति हुनुहुन्छ कति त्यो त मलाई थाहा छैन । जस्तो मेरो काम हेरेर राम्रै सिमपेथी पाइरहेको छु ।
नेपाल सरकारको तर्पmबाट तपाईलाई अहिलेसम्म अथवा नेपाल सरकारले सर्वप्रथम कुन वेला चाहिँ रिकगनेसन गरेको थियो ?
नेपाल सरकारले त रिकगनेसन २००३ मा चाहिँ तपाईकोे फस्ट डिसेवल साइकिलिस्टिक भनेर सम्मान गरेको थियो ।सर्टिफिकेट र पचिँस सय दिनुभएको थियो । पचिँस सय पनि ठुलै पैसा हुन्थ्यो मलाई, त्यहादेखि अहिलेसम्म मैले कुनै पनि सरकारी सहयोग पाएको छैन ।
नेपालमा शारीरिक अपाङ्गता अथवा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु धेरै छन्, त्यो एरियामा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय
विहिन हाम्रो राष्ट्रिय समुदायहरु पनि धेरै छन् तरपनि कहि कतै राम्रोसँग कार्य भइरहेको छैन जस्तो लाग्दैन ।
तपाई हामीले देख्ने नै कुरा हो । तपाईको नेपालमा अपाङ्गगर्न नसक्ने डिफरेन्ट एसिसमेन्टहरु छन् । अपाङ्गको नाउमा ठुल ठुला सेमिनारहरु गर्ने । त्यसपछि अब मेन त भनेको नेपालमा रहेका डिसावेललाई प्रोत्साहन भनेको शिक्षा र यातायात हो । त्यसमा पहुच छैन् यिनिहरु नेपालमा भएका डिसावेललाई कसरी चाहिँ सक्षम भएर अगाडि बढ्न सक्छन् । कस्तो भने धेरै संघ सस्थाहरु छन् तर काम भनेको सहरी केन्द्रीत मात्र भयो । गाउँगाउँमा अपाङ्ग संघसंसस्था भनेको थाहै छैन ।मेन प्राइरेटी अपाङ्ग संघ सस्थाले शिक्षा र यातायातमा प्राथमिकता दिनु पर्ने हो । त्यसपछि अरु अरु चिजमा अवसर दिदा नेपालमा रहेका अपाङ्गलाई धेरै सहज हुन्थ्यो ।
सामाजिक स्तरमा पनि अपाङ्ग व्यक्तिलाई अपहेलना गर्ने एक किसिमको संस्कार छ त्यसलाई उल्मोलन गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
पहिले भन्दा त अहिले धेरै चेन्जेज भएको छ । कुनै एउटा राम्रो फेम्लीमा कुनै अपाङ्गता भएका बच्चाहरु जन्मेका छ
न् भने उहाहरुले सोसाइटीमा चिनाउनु मेरो घरमा अपाङ्ग छ है छोराछोरी छ है भन्नु । अहिले त संसार कहाँ देखि कहाँ पुगिसक्यो, संसारमा धेरै अपाङ्गहरुले विश्व किर्तिमान पनि गरिरहेका छन् ।झमक दीदिको इक्जाम्पल दिउ न उहाँलाई अन्तराष्ट्रले चिन्छ । अवसर भन्दा पनि अवसर त चाहिन्छ चाहिन्छ साथै हाउ क्यान मे वि एविलिटि । डिसावेल बालबालिकालाई कसरी अगाडि बढाउने, उनीहरुको मनोवललाई कसरी स्ट्रङ पार्ने कुरा चाहिँ फेम्ली, सोसाइटी हरएक बुद्धिजिवीबनेर अपाङ्गलाई सहजिकरण गर्नुपर्छ ।
तपाईले भरर्खरै उदाहरुण दिनुभयो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पनि आप्mनो कार्य क्षेत्रमा प्रसिद्धि कमाएर बसिरहेका उदाहरुण पनि छन् । तपाई पनि उदाहरण मध्ये एक पर्न हुन्छ । संसारको दृष्टीकोणमा हेर्न हो भने पनि धेरै नै छन् ।
मुख्य अवसर प्रदान गर्न राष्ट्रको हुन्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईलाई सामाजिक स्तरबाट पनि एककिसिमको अभियान गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
यो अभियानलाई समाज टोल र मेन दायित्व भनेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ जुन हाम्रो डिसावेल फेडेरेसन छ । मेन पहल चाहिँ उहाँहरुले गर्भरमेन्टलाई गर्ने र कर्भरमेन्टसंग सहकार्य गरेर नेपालमा रहेका धेरै प्रकारका अपाङ्ग हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई उहाँको लाइफस्टाइल कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ कस्तो प्रकारको कार्यक्रम ल्याउदा उहाहरुलाई सुलभ हुन्छ । त्यो काम भनेको नेपालमा रहेका
डिसावेल एसोसियसनहरुले गर्भरमेन्टसँग मिलेर गर्ने हो त्यसमा त हामी छ दै छौं । उहाँहरु नै मौन भएपछि हामीले कसरी गर्ने ।
देशमा एउटा संक्रमणकालको अवस्था छ । संविधान लेखन कार्यमा जुटीरहेका छन् सवैदल पार्टीहरु यसमा पनि अपाङ्गता भएको सिट सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने यस्मा कसरी लिनुहुन्छ ?
मेरो बुझाइमा चाहिँ के छ भने म त्यति राजनीति कुरा इन्ट्रट छइन । अब तपाईको नेपालमा रहेका अपाङ्गहरुलाई के गर्न सकिन्छ उहाँले त्यो प्राथमिकता दिनु प¥यो । आप्mनो सुविधा मात्र हेर्न तपाई हामीले अहिलेसम्मको राजनीति देखेकै हो । मेन भनेको जुनसुकै क्षेत्रबाट अपाङ्गको सिटमा जाने रहेता पनि । नेपालमा रहेका अपाङ्गहरुको हितलाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ मेन
प्राथमिक त्यो सोच लिएर जानुपर्छ । नेपालमा रहेका अपाङ्गले सुविधा पाउने हो भने सरकारले चाहिँ भन्न त मिल्दैन । त्यति नै गर्न नसकेत
तपाईको सभासद भएर भक्ता खानुको कुनै मतलव भएन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई एउटा राम्रो अवसर प्रदान गर्नका लागि अपाङ्गता भएकै व्यक्ति संविधान सभामा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन त्यसो भए ?
जरुरी त छ तपाईको डिसावेल सेक्टरबाट पनि सभासदको लागि रिप्र्रजेन्ट गर्नु प¥यो किनकी तपाई अहि
लेसम्म देखिराख्नु भएको छ किनकी हामीजस्ता डिसावेलले पनि अवसर पाउनु प¥यो । सभासदमा बसेर नेपालमा अपाङ्गहरुलाई पनि धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ । अपाङ्ग भएको सभासद हुनुहुदैन भन्ने कुरा होइन ।हुनु आवश्यक छ उहाहरु भएको खण्डमा नेपालमा रहेका लाखौं अपाङ्गहरुले केही राहत पाउनुहुन्छ, हेदै जाउ के के हुन्छ ।
अन्तमा भन्नुपर्दा नेपालमा भएका जतिपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि एउटा उदाहरुण चित्र तपाई आपैm हुनुहुन्छ ।
तपाई जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई केही सन्देश छ ?
मेरो सन्देश भन्नुपर्दा अपाङ्ग भनेर आफुलाई जीवनमा कहिले लिनु भएन । म अपाङ्ग छु मेलै केही गर्न सक्नुप¥यो मैले प्रेरणा पाए भने समाज र घर परिवारलाई केही गर्न सक्छु भन्ने मनिस्थिति बनानउनु पर्छ । अपाङ्ग छु भनेर हिनतावोध भएर कहिल्यै वस्नु भएन ।मेन भनेको अपाङ्गता भएका फेम्लीले प्रोत्साहन दिनुप¥यो । उहाहरुबाट के उचित छ केमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ त्यसमा प्राथमिकता दिनुप¥यो । उहाँहरुको आत्मबल मनोबलाई बढाउनुप¥यो ।
मैले सोध्न छुटेको हजूरलाई केही भन्न मन लागेको केही अपिल छ तपाईको ?
अपिल त मैले वर्षाै देखि अपिल गर्दै आइरहेको छु । मेरो अभियानलाई सरकारले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले, अपाङ्गको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले हातेमालो गदै सिङ्गो राष्ट्रले चाहिँ केही लाभ पाउछ भन्ने मैले एउटा धारणा बोकेको छु । नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा फरफराउदै हिड्नु एउटा ठुलो चुनौतीको काम हो । जती नेपाल टेलिभिजन वोर्डले, नेपाल पर्यटन वोर्डले गर्न नसक्ने काम मैले गरेर देखाएको छु । मेरो अभियानलाई साथ दिएमा धेरै राम्रो हुनेथियो ।नेपालले पनि लाभ पाउने नेपालमा रहेका अपाङ्गहरुले पनि म बाट केही प्रेरणा पाउनुहुन्थ्यो ।